Nagarik Shukrabar - धरापमा अनमोलको स्टारडम
शुक्रबार, ०४ फागुन २०७४, ०३ : ५३ | अनिल यादव
पर्दामा अचानक जन्मने भिलेन (अनुपविक्रम शाही) र अभय बीचको द्वन्द्वमा फिल्मको दोस्रो भाग केन्द्रित छ । निर्देशकले कथामा केवल नयाँ ‘ट्विस्ट’ ल्याउन मात्रै भिलेनको प्रवेश गराएको देखिन्छ ।
एक्सनका केही दृश्यमा अनमोल गजब देखिन्छन् । फिल्ममा प्रेम र बदलाको कथा छ तर विडम्बना यसले दर्शकको मनभित्रको संवेदनालाई छुन सक्दैन । पानीमाथिको तेलझैँ बगिरहन्छ ।
यो फिल्मको जति चर्चा र प्रतीक्षा भयो त्यसको एकल कारण अनमोल नै देखिए । फिल्मको कमजोरीको अपयश एकल निर्देशकको काँधमा चढाएर उनी यसबाट उम्कन सक्दैनन् ।
यो उनको पहिलो फिल्म हैन । जति मिहिनेत उनले आफूलाई नयाँ लुक्समा देखाउन गरेका छन्, त्यत्ति नै मिहिनेत उनले फिल्मको अन्य पक्षमा पनि गरेको भए पक्कै नतिजा फरक हुन्थ्यो ।
अब अनमोलले स्टारडम जोगाउने हो भने निर्देशक, छायांकार, स्क्रिप्ट पनि उत्कृष्ट छान्न सक्नुपर्छ । आफ्नो क्रेजलाई जोगाइरहने हो भने राम्रो अभिनेतामा हुनुपर्ने राम्रो अभिनयको कलासँगै यो गुण पनि अनिवार्य छ । आफूमा छनोटको गुण छैन भने सहयोगीमार्फत् यसको पूर्ति गर्न सकिन्छ । जुन मामिलामा अनमोल नराम्रोसँग चुकेका छन् ‘कृ’ मा ।
‘कृ’भर अनमोल हावी हुँदा यही फिल्मबाट डेब्यू गरेकी अभिनेत्री अदिती बुढाथोकी छायामा परिन् । उनले पर्दामा त्यस्तो कुनै कमाल गर्न सकेकी छैनन् ।
पुुलिस इन्स्पेक्टरको भूमिकामा देखिएका कामेश्वर चौरसियालाई दर्शकले ‘नोटिस्ड’ गर्छन्, सुदाम सिके पनि फिट छन् । सिनेमाटोग्राफी फिल्मको अर्को प्रशंसनीय पक्ष हो । फिल्मको मेकिङमा निर्माताद्वय सुवास गिरी र भुवन केसीले आफ्नो ठाउँबाट बजेट निकासा गर्न कुनै कन्जुस्याइँ नगरेको पर्दामा प्रस्टै देखिन्छ तर लगानी सही ठाउँमा सही ढंगले हुन सकेन भने के हुन्छ ? त्यो पनि यही फिल्मले देखाउँछ ।
फिल्ममा पटक–पटक भिलेनले चार करोडको माल गायब भएको भनेर रिसाइरहन्छ तर त्यो माल कसरी र के भएर गायब भयो फिल्म सकिदासम्म रहस्य खुल्दैन ।
जब (अभय)अनमोल आफ्नो बाल्यकालको प्रेमी हो भनेर (केशर)ले थाहा पाउँछिन्, उनी जिन्स प्यान्ट र टप लगाएर घरबाट दगुरेर कुद्छिन् । अचम्म, जब उनी घरबाहिर पुग्छिन् ड्रेस गायब । एकै पटक कुर्ता सुरुवालमा देखिन्छिन् । यस्ता दृश्य फिल्ममा धेरै छन् ।
सरोज खनालको अभिनय फिल्ममा जीवन्त देखिन्छ । रक्सी नपिइकन रक्सी पिएको अभिनय गर्नु त्यति सजिलो काम होइन तर उनी यसमा जीवन्त देखिएका छन् तर यही भूमिकामा अनमोल अस्वाभाविक लाग्छन् ।
‘कृ’ न दर्शकसँग जोडिन सकेको छ न यसले दर्शकको दिमागलाई व्यस्त राख्न नै । यति भन्न सकिन्छ, यो फिल्म नबनेको भए पनि नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई घाटा हुने थिएन ।
अनमोलका लागि अर्को दुःखको कुरा, उनका डाइहार्ड फ्यानलाई पनि यो फिल्मले रिझाउन मुस्किलै छ । कारण, उनका अघिल्ला चार फिल्मभन्दा पनि झुर छ ‘कृ’ । वास्तविकता यही हो ।
एउटा पर्फेक्ट अभिनेता हुनलाई आकर्षक लुक्स भएरै मात्रै पुग्दैन, ऊ ‘एक्सप्रेसिभ’ पनि हुन सक्नुपर्छ । निर्वाह गरिरहेको क्यारेक्टरलाई केले निर्देश गरिरहेको छ ? यसका आवश्यकता केके हुन् ? यिनीहरु किन यसरी अभिनय गर्छन् ? चरित्रको व्यवहार बारेमा ऊसँग राम्रो अध्ययन हुनुपर्छ ।
राम्रो एक्टर उत्तिकै कल्पनाशील पनि हुनुपर्छ । उसको काम ती मान्छेहरुको अनुकरण गर्नु हो, जो स्वयम् तिनीहरु होइनन् । त्यसैले नयाँनयाँ मान्छेहरुलाई हेर्नु, भेट्नु र उनीहरुको काम नियाल्नु, उनीहरु जे काम गर्छन् त्यो किन गर्छन् भनेर जान्न खोज्नु राम्रो अभिनेताको गुण हो । अनमोलका पाँचवटै फिल्मलाई नियालेर हेर्दा उनमा यसको ठूलो अभाव खड्किन्छ ।